10 Tanàna kanto tsara tarehy indrindra hitsidihana izao tontolo izao | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Tanàna kanto tsara tarehy indrindra hitsidihana izao tontolo izao
Fotoana famakiana: 7 minitra(Last Nohavaozina: 06/02/2021)
Voahodidin'ny natiora tsara tarehy indrindra, tsy voakitikitiky ny fotoana, dia 10 amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra nitsidika ny tany. Manerana an'i Eropa mankany amin'ireo tanàna taloha manitikitika an'i Shina, ity diany ity dia ho feno tantara hatramin'ny vanim-potoana medieval ka hatramin'izao androntsika izao.
Lalamby fitaterana no tena namana tontolo iainana fomba Travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ary Izy no nanaovana Save A Train, Tapakilan'ny lamasinina mora vidy indrindra any Eropa.
1. Tanàna Tranainy tsara tarehy indrindra hitsidika any Eropa: Civita Di Bagnoregio, Italia
1200 taona, miaraka amin'ny niandohany nanomboka tamin'ny taonjato fahenina, Civita di Bagnoregio no zokiny indrindra tanàna tsara tarehy any Eropa. Hahita an'ity lanitra ity ianao 110 km avy any Roma, miala sasatra eo an-tampon'ny havoana. Raha mitsidika ity tanàna vato mahafinaritra ity ianao amin'ny fahavaratra, mety hihaona amin'ny 100 mponina izay miverina mankafy ny fomba fijery mahatsikaiky an'ny faritanin'i Viterbo.
Ary, ho hitanao fa mahavariana indrindra ny mahita fa nitahiry ny tanàna izy Moyen Âge trano rehefa 2 ady lehibe, ary fanakorontanana volkano maromaro. Noho izany, ezaka lehibe no atao mba hitehirizana ity vatosoa italiana ity, mitazona azy tsy ho faty. Noho izany, alohan'ny hanjavonany dia tokony raiso ny lamasinina mankany Viterbo, avy any Rome Termini amin'ny fialantsasatra italianinao manaraka.
Roma mankany Viterbo miaraka amina lamasinina
Siena mankany Orvieto miaraka amina lamasinina
Arezzo mankany Orvieto miaraka amina lamasinina
Perugia mankany Orvieto miaraka amina lamasinina
2. Tanàna Tranainy tsara tarehy indrindra hitsidika izao tontolo izao: Rothenburg Old Town, Alemaina
Rehefa any Alemana ianao dia tokony handeha amin'ny làlambe Romantic, ny 40 minitra’ mitondra fiara eo ny tanàna tsara tarehy indrindra tany Alemaina. Eo ihany koa no hahitanao ny iray amin'ireo 10 tanàna taloha tsara tarehy indrindra hitsidihana an'izao tontolo izao, Rothenburg.
Rothenburg ob der Tauber dia tanànan'ny medieval mahagaga any Bavaria, Alemaina. Ireo tranony miloko pastel milanja hazo dia mbola tsy voakitika avy ao ambadiky ny mandan'ny tanàna voatahiry tsara. Ilay tanàna taloha mahafinaritra dia nahazo ny anarany noho ny toerana misy azy eo ambonin'ny ony Tauber, toerana stratejika ho an'ny celts, hatramin'ny taonjato voalohany am.f.i.. Rotonburg's Plonlein, Kianja Markt, lalan-kely tsy fantatra, ary Castle Gardens no mahatonga azy io ho iray amin'ireo tanàna fahiny mahafinaritra indrindra hitsidika an'i Eropa, ary eto amin'izao tontolo izao.
Berlin mankany Rothenburg Ob Der Tauber miaraka amina lamasinina
Stuttgart mankany Rothenburg Ob Der Tauber miaraka amina lamasinina
Munich mankany Rothenburg Ob Der Tauber Miaraka amina lamasinina
Frankfurt mankany Rothenburg Ob Der Tauber miaraka amina lamasinina
3. Tanàna tsara tarehy tsara indrindra hitsidika izao tontolo izao: Fenghuang any Sina
Tanàna Fahiny Phoenix, Fenghuang dia iray amin'ireo tanàna fahiny voatahiry tsara ao Shina. Rehefa miditra ao amin'ilay tanàna tsara tarehy ianao, fahitana mahatalanjona amin'ny tetezana, tempoly, ary fiainana eo ambonin'ny rano no hiseho aminao, eo afovoan'ny hazo mavesatra sy ny natiora manodidina.
Miaraka amin'ny tantaran'ny 400 taona, an'ny fianakavian'i Ming sy Qing, Fenghuang, dia iray amin'ireo toerana tsy hay hadinoina indrindra ao Shina. Ny iray amin'ireo zavatra manitikitika sy mahavariana indrindra momba ity tanàna fahagola any Sina ity dia ny mponin'ny tanàna, ny foko vitsy an'isa Miao sy Tujia, mbola mitahiry ny fomban-drazana talohan'ny andro moderina sy ny fiainana any amin'ireo trano hazo taloha.
4. Tanàna Nanjing, Shina
Ny rindrina tanàna lehibe indrindra eto an-tany, Nanjing, dia miorina eo amin'ny ony Yangtze. Nanjing dia iray amin'ireo 4 renivohitra taloha any Sina. Ankoatry ny, Nanjing dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra nitsidika eran'izao tontolo izao. Izany dia vokatry ny rindrin'ny tanàna manaitra mbola mijoro sy manodidina ny tanàna, mitazona azy tsy ho voakitikitiky ny fotoana sy ny tantara.
Na izany aza, ny fomba fijery mahatalanjona indrindra an'i Nanjing dia amin'ny alina. Aorian'ny maizina, mirehitra ny tanàna iray manontolo, ary ny Tempolin'i Confucius manaitra dia vao mainka manaitra. Ankoatry ny, afaka mitsidika mari-toerana hafa ianao avy amin'ny tarana Ming, tamin'ny taonjato faha-14. Ohatra, Sun Yatsen's Mausoleum.
5. Tanàna tsara tarehy tsara indrindra hitsidika any Eropa: Avignon, Frantsa
Ny tanàna taloha mahatalanjon'i Avignon any Provence dia naorina tamin'ny taonjato faha-14. Ity tanàna nahagaga ity dia fonenan'ny papa, ary tsy mila tafiditra ao amin'ny finoana kristiana ianao, hankafy ny papa’ lapa gothic. Rehefa avy nidera ny lapa ianao dia afaka nandeha sambo tamina renirano tsara Rhone satria nipetraka teo amin'ny morony havia i Avignon, na jereo ny tetezana malaza Saint-Benezet, tamin'ny taonjato faha-12.
Ny afovoan-tanàna taloha dia miafina ao ambadiky ny rindrina voatahiry tsara ary 39 Tilikambo Fiambenana. Ankoatry ny, raha sendra mitsidika an'i Avignon ianao amin'ny faran'ny herinandro, hankafizinao ny Tsena parasy Alahady, na mandritra ny fahavaratra, avy eo ianao dia ho tsara vintana hanatrika ny festival malaza amin'ny teatra Avignon “in” ary “eny” tamin'ny volana Jolay.
Paris mankany Avignon miaraka amina lamasinina
Mahafinaritra an'i Avignon miaraka amina lamasinina
Marseille mankany Avignon miaraka amina lamasinina
6. Tanàna tsara tarehy tsara indrindra hitsidika any Eropa: efa nampiasaina
tantaram-pitiavana, mahafatifaty, ary miaraka amin'ny maritrano taonjato faha-14, Bruges dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Eropa. Tanàna taloha malaza indrindra any Belzika, efa nampiasaina fivarotana sôkôla, kianjan'ny tsena, tetezana, ary manintona ny ivon-toerana manan-tantara medieval 8 mpitsidika an-tapitrisany isan-taona.
Ary noho izany, hankafizinao bebe kokoa izany raha mandeha vanim-potoana ianao, ary mifangaro amin'ny eo an-toerana 120,000 mponina. Noho izany, ny faran'ny herinandro lava dia mety indrindra hahitanao an'ity tanàna tsara tarehy any Belzika ity ary tena mankafy ny hatsaran'ny angano voatahiry tsara.
Amsterdam mankany Bruges miaraka amina lamasinina
Bruxelles mankany Bruges miaraka amina lamasinina
Antwerp mankany Bruges miaraka amina lamasinina
Ghent mankany Bruges miaraka amina lamasinina
7. Tanàna Tranainy tsara tarehy indrindra hitsidika any Shina: Luoyang, Shina
Tempolin'i Longmen Grottos sy Shaolin, ihany 2 amin'ireo tranokala izay mahatonga ny tanàna taloha Luoyang ho iray amin'ireo tanàna fahagagana mahatalanjona indrindra manerantany. Ho hitanao ny afovoan'ilay tanàna taloha Sinoa Luoyang, eo anelanelan'i Beijing sy Xi'an, amin'ny lamasinina bala.
Nijanona ny tanàna taloha Luoyang, tsy voakasiky ny tantara sy ny fizotry ny fotoana, satria 1600 BC. Ary noho izany, ho talanjona ianao hahita ny vavahady lehibe manarona ny fiainan'ny tanàna. Ankoatry ny, hamakivaky ilay toerana nandalovan'ireo mpivarotra Lasoà voalohany ianao.
8. Tanàna tsara tarehy tsara indrindra hitsidika izao tontolo izao: Prague
Tanana haolo, araka ny fantatry ny mponina, Tanàna Tranainy Prague, mahasarika mpitsidika hatramin'ny taonjato faha-9. Ho voasariky ity tanàna taloha mahafinaritra ity ianao. Ary noho izany, raha mahazo vintana ianao, mitsidika an'i Prague farafaharatsiny mandritra ny faran'ny herinandro. Amin'ity fomba ity dia ho hitanao ny antony maro fa iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra eran'izao tontolo izao.
Ilay foibe manan-tantara taloha dia mijanona ho afovoan-tanàna, mandraka androany, ny toerana ho an'ny fiainana ara-kolontsaina rehetra. Ho hitanao fa ny mpizahatany rehetra dia mivory manodidina ny famantaranandro Astronomia isan'ora eo afovoany.
9. Tanàna tsara tarehy tsara indrindra hitsidika izao tontolo izao: Amsterdam
Amsterdam dia iray amin'ireo lehibe indrindra tanàna malaza any Eoropa, ary iray amin'ireo kely indrindra. Midika izany fa afaka mandeha mamaky ny tanàna iray manontolo ianao afaka roa andro. Na izany aza, what most tourists don’t know is that this Beautiful Dutch town is one of the ancient towns in the world.
Ary noho izany, na eo aza ny habeny, Ny tanàna fahagola ao Amsterdam dia manana toerana manokana maro ilainao herinandro hahitana. Ny tokotany tamin'ny taonjato faha-13 dia misy tokontany miafina maro, nosy milamina, na ny Oude Kerk, ilay trano tranainy indrindra any Amsterdam, ao amin'ny distrika mena. Raha fintinina, afaka nahita zavatra betsaka kokoa tany Amsterdam ianao fa tsy tamin'ny fitsangantsanganana lakandrano nentim-paharazana raha toa ka mikendry ny hahita ireo tantara mitazona azy.
10. Ping Yao Tanàna Fahiny ao Shina
Ny tena mahasarika an'io momba ny tanàna taloha Ping Yao dia ny fampifangaroana ny endrika maritrano. Rehefa mivezivezy eny amin'ny arabe taloha ianao, ny trano, tempoly, ary ny rindrin'ny tanàna dia hitantara ny 5 taonjato maro. Izany dia vokatry ny zava-misy fa ny tanàna taloha Ping Yao dia natsangana tamin'ny taonjato faha-14.
Raha tianao ny tantara ary mahaliana anao ny kolontsaina sinoa, avy eo ny fitsangatsanganana amin'ny arabe lehibe ao an-tanàna dia ho fotoana iainana epic. Hanao dia lavitra ianao amin'ny vanim-potoana iray izay Pingyao no ivon-toekarena ao Shina, ary jereo fa saika tsy nisy niova.
Mora azo amin'ny lamasinina io vatosoa taloha io, mandehandeha any amin'ny gara Pingyao Gucheng, ary avy eo dia mitaingina bus mankany amin'ny vavahadin'ny tanàna.
Eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao amin'ny famolavolana fitsangatsanganana tsy hay hadinoina sy lavitra any amin'ny "Tanàna Tranainy 10 Tsara Indrindra Hitsidika An'izao Tontolo Izao".
Te-hapetraka ao amin'ny tranonkalanao ve ny lahatsoratry ny bilaoginay "Tanàna Tranainy 10 Manintona Indrindra Hitsidika An'izao Tontolo Izao"? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fancient-towns-visit-worldwide%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)